Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Pasipaoro tsy miandany amin'ny lahy sy vavy voalohany navoaka tany Etazonia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • LGBTQ • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Pasipaoro tsy miandany amin'ny lahy sy vavy voalohany navoaka tany Etazonia.
Tonga ny vaovao telo volana taorian'ny nanomezan'ny Departemantam-panjakana ny safidy hanovana ny maha-lahy sy maha-vavy amin'ny pasipaorony ny Departemantam-panjakana nefa tsy manome antontan-taratasy ara-pitsaboana hanaporofoana ny fiovan'izy ireo.
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia nanambara ny famoahana ny pasipaoro tsy miandany amin'ny lahy sy vavy voalohany tamin'ny alarobia.
Ny fanjakana amerikana sasany dia mamela ny olona tsy mimari-droa hamantatra ho 'X' amin'ny fahazoan-dàlana mitondra fiara na endrika ID hafa.
Ny karapanondro tsy miandany amin'ny lahy sy ny vavy dia fampanantenana iray ihany no nataon'i Joe Biden tamin'ny vondrom-piarahamonina LGBT nandritra ny fampielezan-kevitra.
The Panjakana dia nanambara ny alarobia fa namoaka pasipaoro amerikana tsy miandany amin'ny lahy sy vavy.
Araka ny Departemantam-panjakanaNy mpitondra tenin'i Ned Price, Etazonia dia “manohy manao dingana hanehoana ny fanoloran-tenantsika amin'ny fampiroboroboana ny fahalalahana, ny fahamendrehana ary ny fitovian'ny olona rehetra – anisan'izany ny LGBTQI+ olom-pirenena amerikana.”
Departemantam-panjakana Nilaza ny tompon'andraikitra fa tsy ho ela ny mpangataka rehetra dia afaka misafidy 'X' fa tsy safidy lahy na vavy.
Ny vaovao dia tonga telo volana taorian'ny Departemantam-panjakana nanome safidy ireo trans-Amerikana hanova ny maha-lahy na maha-vavy azy amin'ny pasipaorony nefa tsy manome taratasy ara-pitsaboana hanaporofoana ny fifindrany. Tamin'ny fotoana, Sekreteram-panjakana Tony Blinken Nilaza ny tompon'andraikitra fa mbola "manombantombana ny fomba tsara indrindra" ho an'ny safidy tsy binary.
Ny fanjakana amerikanina sasany dia mamela ny olona tsy mimari-droa hamantatra ho 'X' amin'ny fahazoan-dàlana mamily fiara na karazana karapanondro hafa, ary firenena maromaro no efa mamela ny safidy momba ny lahy sy vavy amin'ny pasipaoro. Anisan'izany i Arzantina, Kanada, ary Nouvelle-Zélande, raha firenena maherin'ny am-polony hafa kosa no mamoaka pasipaoro momba ny lahy sy vavy fahatelo ho an'ny olona mifanakaiky na tsy miray tsikombakomba amin'ny toe-javatra sasany. Ny safidy dia hatao ho an'ny mpangataka amerikana rehetra amin'ny fiandohan'ny taona 2022.
Ny karapanondro tsy miandany amin'ny lahy sy ny vavy dia fampanantenana iray ihany no nataon'i Joe Biden tamin'ny vondrom-piarahamonina LGBT nandritra ny fampielezan-kevitra. Nampanantena ihany koa ny fampielezan-keviny fa hiaro ny “olona LGBTQ+ amin'ny herisetra,” hanitarana ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny olona nanova ny lahy sy ny vavy amin'ny alalan'ny fampandaniana ny Lalàna momba ny fitovian-jo, ary hanome fahafahana ny tanora transgender hiditra ao amin'ny efitra fandroana sy efitra fisakafoana izay safidiny.